Algba ama: Kpọrịta site na SMS, Email, Twitter na Facebook | Martech Zone
signal bụ ikpo okwu agbakwunyere maka azụmahịa iji jikwaa, nyochaa ma tụọ mbọ ahịa ha gafere na mkpanaka, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email na ọwa weebụ. Ihu ọma, a CRM + mobile ahịa + email ahịa + na-elekọta mmadụ media management.
Anyị kwenyere na ọrụ marketer ahụ na-esiwanye ike n'ihi mmụba nke ọwa ahịa ngwa ngwa, yana ngwaọrụ iji jikwaa ha. Sọftụwia anyị na-enyere ụlọ ọrụ aka ijikwa mbọ azụmaahịa ha n'otu ebe etiti ebe ha na-ewepụta foto dị n'otu ndị ahịa ha.
Akụkụ dị mkpa nke nyiwe mgbaàmà bụ:
Dashboard - Weta ahịa na ọrụ gị niile n'otu dashboard, na-ezere ịnọgide na-enwe ọtụtụ usoro ngwanrọ.
Ijikwa Ndi ana-akpo - Hazie niile gị ahịa na kọntaktị na otu centralized ahịa nchekwa data.
Akwụkwọ Ozi Email - Họrọ site na ha n'ọbá akwụkwọ nke tupu-wuru, mobile-kachasị email ndebiri iji dị ka-bụ ma ọ bụ hazie gị chọọ.
Izi ozi ederede - Zipu amamọkwa ozi ederede nke onwe, oge na-adọkpụ.
Mbipụta Ọha na Ọha - Denye mmelite na Facebook na Twitter, dezie oge maka nnyefe n'ọdịnihu ma belata URL maka track-click-throughs.
Nlekọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya - Jikwaa ọtụtụ netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta na otu dashboard, soro ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-eso ụzọ gị ma nyochaa mkparịta ụka na netwọkụ mmekọrịta.
Ibe akwukwo - Mepụta mpempe akwụkwọ na-agagharị agagharị, peeji nke ọdịda dabara na ụdị opt-in. Kwalite site na ozi ederede, email ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta.
Coupons - Mepụta mpempe akwụkwọ ederede ma ọ bụ ederede doro anya ị nwere ike kesaa site na ozi ederede, email ma ọ bụ mgbasa ozi.
Jikwaa Ọnọdụ - Ebumnuche ebe-akọwapụtara email na ederede - ma nye ohere ịnweta aha.
Analytics - Enweta miri ahịa nghọta na a nkwado echiche si ahịa gị.
signal email na nbudata peeji ndebiri nwere ike ahaziri nke ọma. Signal nwekwara siri ike API maka mwekota nke usoro ndị ọzọ. A na-ewulite Ama ma nyekwa aka na Isi mmalite, nakwa!
Tags: AnalyticsKupọnsemail Marketingahambido peeji nkeahịa dabere na ọnọdụmobile ọdịda peejiKoodu QRmgbaàmàSMSahịa mmadụozi ederede
LinkTiger: Chọta Njikọ Njikọ Na-apụ apụ na saịtị gị